Fikirka isdilidda | Suomen Mielenterveysseura
Dhibaattoyinka badan ee dhimirka ku dhaca iyo tusaale ahaan xannuunka geerida ee qofka qoyska ka mid ah ayaa keeni karta fikirka isdilidda. Inta badan fikraddan isdilka ah waa dareen aan loo adkeysan karin. Dareen xun sida cabsi, ceeb, niyad xumo, ama murugo ayaa ku weynaada, taasoo qofku iskudayo siduu xaaladdaas uga bixi lahaa. Inta badan fikirkan is-haligaadda waa mid qofku rabo inuu kaga gudbo xaaladdaas adag, ee ma aha mid uu rabo inuu isdilo.
Inkastoo ay xaaladdu u muuqato mid meel looga baxaa aysan jirin oo wadahadal reerka ama saaxiibaduna ay suurtogal ahayn, xaaladdaas xun ee u muuqata in ay jirin meel looga baxo, hadana waxa jira caawimaado dibadda ah. Markuu qofku dhibaatadiisa kala hadlo cid kale, tusaale ahaan shaqaalaha dhibane eegtada, markaas qofku kali kuma noqon arrintiisa ee waxa u suurto galeysa inuu horumar yar ku talaabsado. Dadka ay halakeeysay fikirkan is-haligaadda waxaa u furan caawinaad xooggan oo ah dhibaatada dhanka dhimirka ee ay keentay fikirkan is-haligaadda sida niyadjabka ee aan horey loo ogaan.
Ka caawinta Fikirka isdilidda
Telefoonka Dhibaatooyinka ee qaranka
Telefoonka dhibaatooyinka ee qaranka wuxuu kuu suurtagalinayaa inaad kala hadasho firkaadas, dareenkaada iyo xaaladda noloshaada shaqaalaha dhibaatooyinka ama dadka loo carbiyay oo iskawaxuqabso ah. Kuwada sheekeeysiga telefoonku wuxuu ka caawinayaa sidii aad uga gudbi lahayd mustaqbalka ugana fikiri lahayd sidii horey ugu tilaabsan lahayd noloshaada. Telefoonka dhibaatooyinka waxaa laguu sheegi doonaa talooyin iyo warbixinno la xiriira caawimaadda aad dooneyso.
Lambarka telefoonka dhibaatooyinka waa 01019 5202
Waqtiyada degdeggana waa
Isn-jim sacadda 9:00-06:00
Sab saacadda 15:00-06:00
Axd saacadda 15:00-22:00
Xarumaha dhibaatooyinka ee gudaha
Xarumaha dhibaatooyinka waxa ku meelo badan oo Finland ka mid ah kuwaasoo bixiyo caawimaadaha dhibaatada nolosha. Xarumaha dhabaatooyinka waad kala hadli kartaa si kalsooni ku jirta xaaladda noloshaada. Xarunta waxaa ka hawlka dad khibrad u leh dhibaatooyinka iyo kuwa si iskawaxuqabso dadka caawiya.
Xarumaha caafimaadka ama isbitaalada ee degdegga
Xarunta caafimaadka ee xaafaddaad ama isbitaalka qeybta degdegga ayaad la xiriiri kartaa. Degmo walbaa waxay leedahay isbitaalka qeybta degdegga oo afar iyo labaatan saac ah. Markaad la xiriirto xarunta caafimaadka ama isbitaalka waa inaad u sheegtaa in fikirka isdilka ahi dhib kugu hayo oo aad caawinaad u baahan tahay. Baahidaada lama dhayalsanayo. Caawinaado waxay noqon kartaa wadahadal, isbitaal dhigid ama ka daaweyn niyadjab. Inta badan fikirkan ah is-haligaadda lama dareemi karo ama wuxuu noqon karaa niyadjab aan daaweyn helin. Weliba Akhri hababka daaweynta niyadjabka.
Isbitaalkaada qeybta degdegga waxaad ka heleysaa bogga internetka ee adeegyada caafimaadka ee degmadaada (eeg tusaale ahaan xarumaha caafimaadka ee dagmooyinka: Helsinki, Vantaa, Lahti). Sidoo kale lambarka adeega la talinta caafimaadka ee qaranka 10023 oo 24ka saac shaqeynaya oo kuusheegi doona isbitaalka qeybta degdegga ee kuugu dhow. Magaalooyinka qaar waxaad si toos ah kaalmo uga doonan kartaa qeybta degdegga ee bukaan socod eegtada caafimaadka dhimirka iyda oo takhtar kuu dirin.
Daryeelka caafimaadka shaqaalaha, bukaan socod eegtada khaaska, daryeelka caafimaadka ardeyda
Xarumo badan oo caafimaadka ayaad ka heli kartaa caawinaad fikirkan ah is haligaadda. Tusaale ahaan waxaad kale hadli kartaa kalkaaliyaha ama takhtarka caafimaadka shaqaalaha ama kalkaaliyaha caafimaadka ee iskoolka.Ka gudbidda kali ku ahaansha iyo u soo bandhigidda xaaladdaada qof kale waxay kuu fududeyneysaa inaad horey uga gudubto xaaladdii adkeyd ee aad ku jirtay. wadahadalka kadib dadka khibradda u leh daryeelka caafimaad waxaad ka heleysaa daryeel sida wadahadal ama daaweyn laguu bilaabo.